परमेश्वरको नयाँ काम - Nepali Christians Site
परमेश्वरको नयाँ काम
Posted by Resham Kumar sunuwar on December 29, 2013 at 10:58am
हामी भर्खरै ख्रीष्टमसलाई विदाई गरेर नयाँवर्ष २०१४ लाई स्वागत गर्न लागीरहेका छौं । जसरी ख्रीष्टमससँग येशूको जन्मसँग सम्बन्धित छ, त्यसैगरी अंग्रेजी मितिको पनि येशू ख्रीष्टसँग नै सम्बन्धित छ । येशू ख्रीष्टको जन्मको समयबाटै अंग्रेजी मिति निर्धारण गरिएको छ । येशू जन्मनु भन्दा अगाडिको समयलाई बि. सी. (बिफोर क्राईष्ट) र येशू जन्मेपछिको समयलाई ए. डी. भनिन्छ । यसरी हामीले नयाँवर्ष २०१४ लाई फेरी स्वागत गरीरहेको अवस्थामा सबैलाई नयाँवर्ष २०१४ को हार्दिक शुभकामना ।
“बितेका कुराहरुलाई भुल । उहिलेका कुराहरुलाई बिचार नगर । हेर, म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु । त्यो जब हुन आउँछ । के तिमीहरु त्यो देख्दैनौ ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमीनमा खोलाहरु बनाउँनेछु ।” यशैया ४३ः१८–१९ ।
यशैयाले यहाँ ईस्राएलीहरु तिनीहरुको उजाड अनि निराशामय ईतिहासमा कष्टकर जीवन जिईरहेका बेला यो सन्देश दिएका थिए । तिनीहरुले परमेश्वरको कुरा नटेरेको कारण शत्रुहरु आएर आक्रमण गरे । तिनीहरुलाई कैदी बनाएर लागे । तिनीहरुसँग भएको सबै कुरा गुमाए । तिनीहरु शत्रुहरुको कब्जा र कैदमा रहेकोले आफ्नो भूमिको याद गरे । एउटा कठिन मोडमा जीवन चलीरहेको थियो । यस्तो घोर अनि उजाड समयमा तिनीहरुको माझ यशैया अगमवक्ताद्धारा परमेश्वरको प्रतिज्ञायुक्त सन्देश बोलिएको थियो ।
यहाँ तिनीहरु अहिले जुन कुरामा केन्द्रीत भएर चिन्तित र निराश थिए, त्यही कुरामा अल्झेर रहेका थिए । परमेश्वर यहाँ एउटा नयाँ काम गर्न जाँदैछु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर त्यसको लागि तिनीहरुले जुन अवस्थामा आफ्ना दृष्टि लगाएर बसेका थिए, त्यसबाट बाहिर निस्कनु पर्ने थियो । तिनीहरुलाई “बितेका कुराहरुलाई भुल । उहिलेका कुराहरुलाई बिचार नगर । भनेर भनिएको थियो । बितेका कुरालाई भुलेर हामी अगाडिका कुरामा बढ्नु पर्छ भन्ने जोड दिईएको थियो । उहिलेका कुराहरुलाई बिचार गरेर वर्तमानमा कष्टकर जीवन बाँच्नु उपयुत्त हुँदैन अनि आउने दिनहरुको लागि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा र आशिषको निम्ति अगाडि बढ्नु नै उत्तम हुनेछ । यदि हामी पछाडि फर्केर पछाडिको कुरामा भुली बस्छौं भने अगाडिको कुरा हामी देख्न सक्दैनौ । यदि हामी ख्रीष्टमा नयाँ काम देख्न चाहन्छौं भने हामी वितेका कुरालाई भुलेर अगाडिका कुरा हेर्नुपर्छ । वितेका कुरामा हामी भर पर्न सक्दैनौ वरु आउने कुराको लागि तयारी भएर आगाडि बढ्नु पर्दछ । इृस्राएलीले पनि त्यही कुरा सिक्नु थियो । ईस्राएलीको जीवनमा वितेका दिनहरुमा उहिलेका दिनहरुमा निश्चय पनि थुप्रै विजय र सफलता हासिल गरेका थिए । मिश्रबाट विजय बनेर निस्केका थिए । कनानमा पनि तिनीहरु विजय बनेर तिनीहरु यस्ता थुप्रै बिजय र सफलताबाट भएर आएका थिए । तर पनि यी वितेका उनीहरु सफलताले आउने दिनमा भर पर्न सकिने अवस्था थिएन् । तिनीहरु कैदी र उजाडिएको अवस्थामा बाँचीरहेका थिए । यिनीहरुले वितेको कुरालाई भुलेर अगाडि नयाँ शिराबाट बढ्नु पर्ने नै थियो । किनकि तिनीहरु कैदमा थिए । तिनीहरु समस्यामा थिए । तिनीहरुको विगतमा गरेका विजय र सफलताले उनीहरुको उजाड अवस्थालाई सुधार गर्नेवाला थिएन । उनीहरुको लागि एउटा नयाँ काम अनि नयाँ आश्चार्यकामको खाँचो थियो ।
अर्कोचाहिं कुनै पनि मानिसले त्यसको विगतमा भएको हार अनि असफलताहरुलाई उसको जीवनमा राज्य गर्ने मौका दिनु हुँदैन । ईस्राएलीहरुमाथि परमेश्वरले प्रशस्त आशि दिनुभयो । तिनीहरुमाथि काम गर्नुभयो । तरै पनि तिनीहरु परमेश्वरप्रति दुष्टता बने । परमेश्वरलाई ईन्कार गरे । तिनीहरुको जीवन त्यसैकारण समस्यामुलक बन्यो । परमेश्वरलाई भुलेर तिनीहरु मूर्तिपुजातिर लागे । परमेश्वरको सत्य कुराबाट टाढिएर तिनीहरु असत्य र झूटा कुरामा अलमलिए । परमेश्वरमा भरोसा राख्नुको साटो परमेश्वरलाई ईन्कार गरेका थिए । वास्तवमा परमेश्वरबाट ईस्राएलीहरु कुनै कुरा पाउन योग्यको थिएनन् तरै पनि परमेश्वरले तिनीहरुलाई प्रेम गर्नुभयो । उनीहरुको त्यो उजाड अनि निराशाको समयमा परमेश्वरको सन्देश पठाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बितेका कुराहरुलाई भुल । उहिलेका कुराहरुलाई बिचार नगर । हेर, म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु । परमेश्वरले तिनीहरुको वितेको कुरालाई सम्झनु भएन । तिनीहरुको भूल गल्तीहरुलाई याद गर्नु भएन । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हामी हिजोको विश्वासमा जिउने कुरा होईन । वितेका कुरामा भर पर्ने पनि होईन । तपाइँको जीवनमा आज तपाइँले के देख्नुहुन्छ? सम्भावाना देख्नुहुन्छ कि समस्या देख्नुहुन्छ? यहाँ ईस्राएलीहरु वितेका कुरामा हराए । उजाडिएका कुरा अनि असफलता र समस्याको कुरामा हराईरहे । तर परमेश्वरलेचाहिं तिनीहरुको जीवनमा एउटा नयाँ काम गर्न चाहनु भयो । हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु । निश्चय पनि नयाँ वर्षको आगमनसँगै हामीले परमेश्वरको नयाँ काम हाम्रो जीवनमा भएको देख्नेछौं । परमेश्वरको नयाँ कामको आपेक्षा हामीले गर्नु पर्दछ । किनकि परमेश्वरले नयाँ काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ ।
के तिमीहरु त्यो देख्दैनौ ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमीनमा खोलाहरु बनाउँनेछु । यहाँ भनिएको छ । के तिमीहरु देख्दैनौं? हो परमेश्वरको काम हामीले देख्नु पर्छ । किनकि परमेश्वरको कामलाई हामीले आत्मिक रुपले हेर्न सिक्नु जरुरी छ । कतिचोटी हामी वितेका कुराहरु हेरी बस्दा परमेश्वरको आउन लागेको नयाँ कुरा देख्न असमर्थ हुन्छौं । परमेश्वरले यशैयालाई यही कुराको प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो ।
म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमीनमा खोलाहरु बनाउँनेछु । यहाँ मरुभूमिमा एउटा बाटो बनाउने प्रतिज्ञा गरिएको छ । निश्चय पनि मरुभूमि असल प्रकारको ठाउँ होईन । कतिचोटी मरुभूमिको जीवन अनि यात्रा सहज र सजिलो हुदैन । त्यहाँ पानी हुदैन । त्यहाँ भने जस्तो सुविधा र सबै कुरा उपलव्ध हुँदैन । एक प्रकारले कठिन ठाउँ हो मरुभूमि । ईस्राएलीहरुको जीवन एक प्रकारले मरुभमि जस्तै बनीरहेको थियो । कुनै बाटो थिएन । उनीहरु कैदी अवस्थामा थिए । जीवनदेखि आफैलाई दिक्क लागीरहेको अवस्था थियो । यस्तो बाटो नै नभएको अवस्थामा पनि परमेश्वरले बाटो बनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो । एउटा नयाँ काम जो मरुभूमिमा बाटो बनाएर तिनीहरुलाई अगुवाई अनि डोराउने काम गर्न लाग्नुभएको थियो । निश्चय पनि आज हामी कतिजनाको जीवन मरुभूमि जस्तै छ होला । कति जनाको योजना अनि हरेक क्षेत्रहरुमा मरुभूमि जस्तै बनीरहेको होला । बाटो नभएको अनि त्यतिकै हराईरहेका जस्तो होला । तर परमेश्वरले तपाइँको जीवनको मरुभूमिबाट बाटो बनाउनु हुन्छ । तपाइँको जीवनमा उहाँको मार्ग दर्शन गर्नुहुन्छ । यो नयाँ वर्षमा परमेश्वरले तपाइँको जीवनमा नयाँ नयाँ काम गर्नुहुनेछ । परमेश्वर तपाइँको जीवनको लागि पथप्रदर्शक हुनुहुन्छ ।
अनि परमेश्वरले रुखो जमीनमा खोलाहरु बनाउनेछु भनेर ईस्राएलीहरुलाई भन्नु भएको थियो । रुखो जमीनमा खास कुनै प्रकारको उब्जाउ हुँदैन । रुखो जमीन अथवा सुःख्खा जमीन खोला नभएको जमीनमा खोला बनाउनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नु भयो । ईस्राएलीहरुको जीवन खोला नभएको रुखो जमीन जस्तै बनेको थियो । कुनै प्रकारको फलदायी जीवन थिएन । कुनै प्रकारको उत्पादक प्रकारको जीवन थिएन । वितेका कुराहरु सम्झीरहेका थिए । उहिलेका कुराहरु विचार गरीरहेका थिए । तर काम आजको थियो । अनि परमेश्वरको नयाँ काम हुनेवाला थियो । तिनीहरुले हेर्नु पर्दथियो । आज हामीले पनि हाम्रो जीवन यदि रुखो जमीन जस्तै छ भने बुझ्नु पर्यो कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा खोलाहरु बनाउनुहुन्छ । परमेश्वरले रुखो जमीनलाई खोला बनाउनेछु भनेर भन्नुभयो जो चाहिं नवीकरण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित थियो । यो नवीकरण गर्ने कुराचाहिं नयाँ बनाउने अर्थात पहिलेको अवस्थामा पुराउने भन्ने हुन्छ । व्यर्थै खेर गईरहेका हाम्रा जीवनका क्षणहरु, हाम्रा बिग्रिएका सम्बन्धहरु अनि हाम्रा आर्थिक संकटका कुराहरु लगायत जो मरुभुमि अनि रुखो जमीनको रुपमा रहीरहेका छन् । जो उजाड बनीरहेका छन् । यो नयाँ सालमा अनि यी आउने दिनहरुमा परमेश्वरले नवीकरण गर्नुहुनेछ । अनि यो रुखो जमीनमा खोला बनाउने भनेको परमेश्वरको जागृति हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने पनि हो । सेलाएको आत्मिीकी जीवनमा, परमेश्वरबाट पछि हटेको विश्वासी जीवनमा अनि थकित मण्डली अनि विश्वासीहरु जो रुखो जमीन जस्तै बनीरहेका छन् उहाँले खोलाहरु बनाउनुहुनेछ । उहाँले जागृति पठाउनुहुनेछ ।
के तपाइँको जीवन मरुभूमि जस्तै छ? रोग, व्यथा, पिंडा, समस्या, अभाव, अशान्ति, डर, निराशा अनेक प्रकारको समस्याले तपाइँलाई पेलीरहेको छ ? शायद तपाइँको जीवनमा थुप्रै प्रकारको मरुभूमिले सताएको छ होला । तपाइँको भविष्य अन्धकार जस्तो देख्नुभएको छ कि? कुनै आशा नभएको जस्तो मरुभूमियुक्त जीवनको लागि परमेश्वरले नयाँ काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ काम र बाटो बनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ ।
“बितेका कुराहरुलाई भुल । उहिलेका कुराहरुलाई बिचार नगर । हेर, म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु । त्यो जब हुन आउँछ । के तिमीहरु त्यो देख्दैनौ ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमीनमा खोलाहरु बनाउँनेछु ।” यशैया ४३:१८–१९ ।
हामीले वितेका कुरालाई विसेर परमेश्वर गर्न लाग्नुभएको नयाँ कामको लागि उत्साहति हुनु जरुरी छ । हरेक पल्ट परमेश्वर हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ । वितेका कुरामा हामी भर नपरौं । वितेका विश्वासको कुरामा भर पर्ने पनि होइन । परमेश्वरले नयाँ काम हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ । तपाईको जीवनको मरुभूमिमा परमेश्वरले बाटो बनाउन चाहनुहुन्छ । अनि तपाईको जीवनको रुखो जमीनमा उहाँले खोलाहरु बनाउनुहनेछ । परमेश्वरको नयाँ काम तपाईको जीवनमा आशा गर्नुहोस् । नयाँ साल तपाईको निम्ति आशिषमय बनोस् ।
- रेशम कुमार सुनुवार Views: 192
Comment by Resham Kumar sunuwar on January 2, 2014 at 11:18am Dui jana Aruna sisterharulai dhanyabad chha hai ta amen. Comment by अरुणा राई ! on January 2, 2014 at 5:26am तपाईले सही भन्नु भयो बितेको कुरालाई भुलेर भोली हुन लागेको नयाँ कुरालाई सम्झेर अघि बडौ ! जुन कुरा पहिले हुन सकेन त्यो पछि कहिले न कहिले आव्श्यै हुनेछ ! बाईबलले भन्छ - हरेक कुराको समय हुन्छ ! पर्मेश्वरको समय आए पछि हाम्रो निम्ती हरेक असम्भव काम सम्भव हुनेछ !
तपाईलाई पर्मेश्वरले आशिष दिएको होस् रेशमज्यु ! Comment by aruna chhantyal on January 1, 2014 at 4:30pm “बितेका कुराहरुलाई भुल ।
उहिलेका कुराहरुलाई बिचार नगर । हेर, म
एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु । त्यो जब हुन आउँछ । के
तिमीहरु त्यो देख्दैनौ ? म
मरुभूमिमा एउटा बाटो र
रुखो जमीनमा खोलाहरु बनाउँनेछु ।”
यशैया ४३:१८–१९ ।
हामीले वितेका कुरालाई विसेर परमेश्वर गर्न
लाग्नुभएको नयाँ कामको लागि उत्साहति हुनु
जरुरी छ । हरेक पल्ट परमेश्वर
हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ ।
वितेका कुरामा हामी भर नपरौं ।
वितेका विश्वासको कुरामा भर पर्ने
पनि होइन । परमेश्वरले नयाँ काम
हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ ।
तपाईको जीवनको मरुभूमिमा परमेश्वरले
बाटो बनाउन चाहनुहुन्छ ।
अनि तपाईको जीवनको रुखो जमीनमा उहाँले
खोलाहरु बनाउनुहनेछ । परमेश्वरको नयाँ काम
तपाईको जीवनमा आशा गर्नुहोस् । नयाँ साल
तपाईको निम्ति आशिषमय बनोस् ।
amen. Ramro bachan guruba RSS